पागल (सूत्रकथा) | मझेरी डट कम
editor — Sun, 05/15/2016 - 21:41
-मुकुन्दले जातीय विभेद र छुवाछूत मान्दै मानेन।
-महिला र पुरुषबीचको असमानता जरैदेखि उखेल्नुपर्ने धारण राख्यो।
-छोरीलाई पनि छोरा सरह उच्च शिक्षा र पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार हुनुपर्छ भनेर वकालत गरिरह्यो।
-विद्यमान अन्याय,अत्याचार,शोषण,दमन र थिचोमिचोको भण्डाफोर गर्न थाल्यो।
-युवाहरूलाई सामाजिक न्याय स्थापित गर्न शोषण र उत्पीडनविरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर प्रशिक्षण दिन थाल्यो।
-यो देखेर त्रसित अनि भयभित टाठाबाठाहरूले ऊविरुद्ध गोप्य बैठक गरे।
-बैठकको निर्णय अनुसार गाउँभेला बोलाईयो।
-पूर्वयोजना मुताविक उसलाई पागल घोषणा गरियो।
-ठूलाबडा भनाउँदाको डरले मुकुन्दलाई मन पराउनेहरू समेत चुँईक्क बोलेनन्।
- एक्काइसौं शताब्दी भने त्यो समाजलाई गिज्याइरहेको थियो।
Skanda Kumar (not verified) — Mon, 05/16/2016 - 05:36
सर यो त सूत्रकथा हो,लघुकथा होइन नि।
सूत्रकथा नवीनतम प्रयोग
Aayushma kafle (not verified) — Thu, 05/19/2016 - 06:54
सूत्रकथा साहित्यमा नवीन प्रयोग हो,यसको रचना र प्रसार गर्नु वान्छानीय छ
सुत्रकथा भन्ने कस्तो विधा
editor — Fri, 05/20/2016 - 04:32
सुत्रकथा भन्ने कस्तो विधा पर्यो प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?
Skanda Kumar (not verified) — Sat, 05/21/2016 - 11:12
सूत्रकथा आख्यानात्मक गद्यलेखनको लघुतम रुप हो र त्यस फाँटको नवीनतम प्रयोग पनि हो।सूत्रकथामा सूक्तिमयता,सूत्रात्मकता,आदि,मध्य र अन्त्यको सटीक संयोजन,पात्र र परिवेशको सामान्जस्यता,भाषिक तरलता,शैल्पिक सहजता,संरचनात्मक कलात्मकता,कथनगत विश्वसनीयता,कथ्यको कसिलोपन र अनुभूतिमा तीक्ष्णपन रहने एकदेखि पन्ध्र सोह्र पङ्तिभित्र रचिने एवम् थोरैमा धेरै व्यक्तिने एक सशक्त साहित्यिक प्रविधा हो।
कुमार सर यस सम्बन्धी अालेख तयार गरेर पठाउँ त?
धन्यवाद कुमारजी, अवश्य
editor — Sat, 05/21/2016 - 14:10
धन्यवाद कुमारजी, अवश्य पठाउनुहोस् ।
HomSuvedi — Tue, 05/31/2016 - 15:56
कृपया क्षमा गर्नुहोला कुमारजी । हुन ता सूत्रकथाको कुनै नवीन परिभाषा वा परिचय भएकाे छैन । यी नवप्रयाेगका कुराहरु हुन् । कता छेस्को कता के कता के बनाइरहेका छन् नवप्रयोगवादीहरुले । जहाँसम्म यसलाई तपाई‌ले सूत्र कथा भन्नु भो म अलिक रनभुल्नमा परे‌ । यो ता मेराे विश्लेषणमा एक लघुकथा नै हुनु पर्ने हो । किन भने पात्र एकै छ । एकै पात्रलाई परेको सामाजिक समस्यालाई अन्तर ले देखाउँछन् ।
धन्यवाद होम सुवेदी गुरु
Skanda kumar (not verified) — Tue, 06/28/2016 - 07:41
पागल सूत्रकथामाथि हजुरले गर्नुभएको टिप्पणी प्रति आभारी छु।सूत्रकथा चालीसको दशकमा आख्यान पुरुष डा.ध्रुवचन्द्र गौतमले सूत्रपात गर्नुभएको रहेछ,जुनबेला म त जन्मिएकै थिइनँ होला सायद।पुस्तकाकार रुपमा भने प्रयोगवादी स्रष्टा अमर त्यागीले २०७१ सालमा अन्धसत्ता सूत्रकथासङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभएको देखिन्छ।आख्यानको लघुतम रुप लघुकथा र सूत्रकथामध्ये लघुकथाको कृति २००७ मा पूर्णप्रसाद ब्राह्मणले 'झिल्का' प्रकाशन गर्नुभएको थियोे।लघुकथा र सूत्रकथाबीच अवश्य केही समानता र भिन्नताहरू छन्।
मेरो कुरा त म साहित्यमा भर्खरै बामे सर्दै गरेको सिकारु र असलमा एक पाठक हुँ।मेरो सूत्रकथा सूत्रकथा नहुन पनि सक्छ,यसप्रति म सचेत छु।
अर्को कुरा हजुरजस्तो अग्रज साहित्य साधकसमक्ष यत्रो टिप्पणी गर्ने धृष्टता गरेँ,माफी पाऊँ।